Madaxweyne Gaas oo Wasiiradiisa kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMadaxweyne Gaas oo Wasiiradiisa kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish.
Madaxweyne Gaas oo Wasiiradiisa kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish.
March 21, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo shir gudoomiyay kulan gaar ah uu la qaatay Golihiisa Wasiirada ayaa kala hadlay Sidii ay u hogaamin lahaayeen Dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo Daacish ee ka socda Deegaanada Puntland.
Wasiirada ayaa la shaqeyn doona Saraakiisha Ciidamada Hogaamineysa sida ilo wareedyo ku sugan Puntalnd ay Warwaat.Com kasoo xigatay, ujeedka ayaa ah in Ciidamada Maamulka Puntland lagu dhiira-geliyo dagaalka.
Dhulka Buuraleyda ah ee Puntalnd waxaa ku sugan Al-Shabaab iyo Daacish, waxa ayna Weeraro ka geystaan Deegaanada Maamulkaasi, gaar ahaan Gobolka Bari.
Kulanka Madaxweyne Gaas iyo Wasiirada kadib ma jiro Mas’uul la hadlay warbaahinta, waxa uuna ahaa kulan qarsoodi ah laguna falanqeynayay arrimo Xasaasi ah sida ilo wareedyadu sheegayaan.
Maamulka Puntland ayaa dagaalo kula jira Al-Shabaab iyo Daacish, iyagoona Garab ka hela Diyaaradaha Reer galbeedka oo badi duqeeya goobaha ay ku sugan yihiin Saraakiisha Al-Shabaab iyo Daacish iyo Xeryaha ay dhalinyarada ku tababartaan.
Sarkaal Somali Mareykan ah oo dambi lagu soo oogay
Xildhibaan Goodax: “mooshinkan Dam-Jadiid ayaa ka dambeysa”.
40,838 total views, 1,591 views today
40,838 total views, 1,591 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
40,911 total views, 1,591 views today
40,911 total views, 1,591 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
40,923 total views, 1,591 views today
40,923 total views, 1,591 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
40,948 total views, 1,592 views today
40,948 total views, 1,592 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
40,978 total views, 1,591 views today
40,978 total views, 1,591 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]